IMotorola Moto One isungulwe eMelika: ixabiso kunye nokufumaneka | I-Androidsis
Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, inkampani yeLenovo yabhengeza Motorola Moto One kwintengiso yaseTshayina. Ngoku, emva kokuba sele uyibekile iyathengiswa eSpain, uyisungule kumhlaba waseMntla Melika, kwaye ngexabiso into esityhila yona apha ngezantsi.
I-Moto One ifowuni yokuqala yenkampani ukuba ifike ngomboniso ongafakwanga, njengoko yenzayo i-iPhone X kunye nezinye, e-United States. Ifowuni ixhotywe ngescreen se-IPS LCD ye-5.9-intshi exhasa isisombululo se-HD + se-1.520 x 720 pixels, kunye nomlinganiso we-19: 9.
I-chipset ye-Snapdragon 625 ikhona phantsi kwe-Motorola Moto One kunye ne-4 GB ye-RAM.. Ngokumalunga nokugcinwa kwangaphakathi, i-terminal inendawo eyakhelweyo ngaphakathi ye-64 GB yomthamo. Kwelinye icala, inendawo yokubeka ikhadi le-microSD yokwanda kwaye ine-3.000 mAh ibhetri exhasa ukutshaja ngokukhawuleza.
Iphaneli yangasemva yeselfowuni inezinto ezili-13 kunye nee-2 ze-megapixel zokuseta ikhamera ezimbini. Kukho i-8 megapixel selfie snapper ebekwe ngaphakathi kwenotshi, ngaphambili. Iskena sokuprintwa kweminwe sifakwe phantsi kwelogo yenkampani ngasemva. ifaka i-chassis enganyangekiyo.
Kuba sisixhobo esinye se-Android, isebenza kuhlobo oluqhelekileyo lwe-Android Oreo Kwaye kuqinisekisiwe ukuba iyakufumana uhlaziyo lwesoftware ngezinga elikhawulezayo kule minyaka mibini izayo. Kutshanje, ifowuni ye-Motorola One Power yafunyanwa nge-Android 2 Pie kwiGeekbench. Ke kunokwenzeka ukuba i-Moto One kunye ne-Moto One Power fowuni zinokunamathela kuhlaziyo lwe-OS I-Android 9 Pie phambi kokuphela kuka-2018.
Ixabiso kunye nokufumaneka kwe-Motorola One e-United States
Okwangoku Best Thenga kuphela kwivenkile ekwi-intanethi, ngaphandle kwevenkile yakwa-Motorola ekwi-intanethi, ethengisa iMotorola One kwaye ikwi Iindleko zeedola ezingama-399 zase-US (ama-350 eeuros malunga.). Ukucwangciswa kwangaphambili kohlelo olumnyama lwe-smartphone sele kuqalile e-United States.
Ukuthengiswa kwefowuni kuya kuqala nge-11 kaNovemba. Ngaloo mhla, Inkampani iyakubonisa ukwahluka kwayo okumhlophe kweli lizwe. Iselfowuni iza kuvulwa kwaye iza kusebenza neenethiwekhi ze-AT & T kunye neT-Mobile kweli lizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IMotorola Moto One iyafumaneka ngoku eMelika